Wadahadal Dawladda iyo GM - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 8 november 2011 kl 12.49
Wasiirka manaafacaadka ee dalkan Iswiidhen Annie Lööf ayaa mid laga xumaado ku tilmaantay go'aanka shirkadda GM ku muujisay diidmada ay ku joojineeyso heshiiska iibin ee shirkadda Saab la gashay shirkadaha shiineeska ee Pang Da iyo Youngman, isla markaana caddeeysay in xaaladda iminka lagu jiraa aanay dawladdu waxba ka qaban karin middaa.
Shaleyto makhribnimadii ayay ahayd kolkii ay soo shaac baxday akhbaarta ah in shirkadda GM kaga soo hor-jeeddo iibinta leeysanno muhiim ah ee shirkadda Saab oo ey GM weli mulki u leedahay. Leeysannadaa ayey shirkadaha shiineesku ku talo jireen iney ka mid ahaayeen heshiiska ey Saab la gaareen.
- Wasiir ahaan iyo dawladduba waxaan isku dayeynaa intii karaankayaga ah inaan la socono xaaladda, anagoona kala xaajooneeyna amuurtaa shirkadda GM. Dhanka kale waa howl u taala in shirkadda Saab iyo shirkadaha shiineesku heshiis wada gaaraan. Dawladduna waxay isku dayaysaa intii karaankeeda ah sidii xal dheer ee mustaqbalka loo gaari lahaa, inkastoo aanay dawladdu heshiisyada la gaarayo qayb ka ahayn. Sidii go'aan kama dambeeys ah loo gaari lahaan waa mid u taala shirkadaha, sida ay sheegtay Annie Lööf, wasiirka manaafacaadku mar ay u warrameeysay laanta wararka ee Ekot.